Exploding Kittens® - Official 4.0.2 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 4.0.2 လြန္ခဲ့ေသာ3ရက္က
ဂိမ္းမ်ား ကဒ္ Exploding Kittens® - Official
Exploding Kittens® - Official ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ကွောငျကလေး, Kickstarter ကသမိုင်းထဲမှာအများဆုံး-ရန်ပုံငွေဂိမ်းပေါက်ကွဲ, ယခု Android အတွက်ရရှိနိုင်ပါ!
Elan Lee က (Xbox, ARGs), မဿဲ Inman (အဆိုပါ oatmeal) နှင့် Shane အသေးစား (Xbox, အံ့ဩခြင်း) က ed ခြင်း။
- ပေါက်ပေါက်ကွဲပေါက်နှင့်ပေါက်ကွဲမှုနှင့်လေဆာရောင်ခြည်တန်းများနှင့်တစ်ခါတစ်ရံဆိတ်များသို့နေသောလူများအတွက် multiplayer card ကိုဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။
- အွန်လိုင်း2မှ5မိတ်ဆွေတွေသို့မဟုတ်သူစိမ်းနှင့်အတူ Play
- အားလုံးအနုပညာအဆိုပါ oatmeal အားဖြင့်သရုပ်ဖော်
- Kickstarter ကသမိုငျးတှငျအမြားဆုံးကျောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ဂိမ်း၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ဗားရှင်း
တစ်စုံတစ်ဦးကတစ်ဦးပေါက်ကွဲပေါက်ဆွဲယူသည်အထိရုရှားကစားတဲ့၏ဤအမြင့်မား-မဟာဗျူဟာမြောက်, kitty-powered ဗားရှင်းမှာတော့ကစားသမား, ကတ်များသူတို့ပေါက်ကွဲသောအချက်မှာဆွဲ, သူတို့သည်သေကြ, သူတို့သည် t ကိုထဲကဂိမ်းသူများမှာ - ကကစားသမားတစ်ဦးရှိပါတယ်မဟုတ်လျှင် လေဆာညွှန်ပြ, ဝမ်း rubs နှင့် catnip အသားညှပ်ပေါင်တူသောအရာတို့ကိုသုံးပြီးပေါက်ရေပိုင်နက်ပြဿနာဖြေရှင်းရန်နိုငျသော, ကတ်ကိုရေပိုင်နက်ပြဿနာဖြေရှင်းရန်။ ထိုကုန်းပတ်အတွင်းအခြားကတ်များကိုအားလုံးရွှေ့လျော့ပါးစေရန်, ဒါမှမဟုတ်ပေါက်ကွဲပေါက်ကိုရှောင်ကြဉ်ရန်အသုံးပြုကြသည်။
ပေါက်ပေါက်ကွဲ optional ကိုဂိမ်း features တွေကိုအမှန်တကယ်ငွေနှင့်ဝယ်ယူစေခြင်းငှါအရာအတွက်ပေးဆောင် App ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျကို download လုပ်ပါနှင့်ကစားရန်အနည်းဆုံး 13 နှစ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ သူစိမ်းများနှင့်ရရှိလာတဲ့အချက်အလက်လွှဲပြောင်းစွဲချက်ဆန့်ကျင်အွန်လိုင်းယှဉ်ပြိုင်ရန် option ကိုလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်လည်းရှိပါတယ်။ Player ကို username နဲ့အသုံးအနှုနျးမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်ကြသည်။ ပေါက်ပေါက်ကွဲ, LLC သည်များအတွက်တာဝန်မယူကြောင်းနှင့်ကစားသမား username များသို့မဟုတ်အသုံးအနှုန်းများထောက်ခံမပေးပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသီးသန့်မူဝါဒကိုအဘို့, www.explodingkittens.com/privacy သွားရောက်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆုံးအသုံးပြုသူလိုင်စင်သဘောတူညီချက် (EULA) အတွက်, http://www.explodingkittens.com/eula သွားရောက်။
Exploding Kittens® - Official အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Exploding Kittens® - Official အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Exploding Kittens® - Official အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Exploding Kittens® - Official အား အခ်က္ျပပါ
reepje123 စတိုး 4.68k 1.63M
Exploding Kittens® - Official ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Exploding Kittens® - Official အခ်က္အလက္
ထုတ်လုပ်သူ Exploding Kittens
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.explodingkittens.com/privacy
App Name: Exploding Kittens® - Official
Release date: 2019-09-18 19:56:01
လက်မှတ် SHA1: 9C:41:FE:E0:2D:9A:38:B4:82:E3:5A:86:C0:CF:1D:D2:11:46:57:FF
အဖွဲ့အစည်း (O): Substantial
Exploding Kittens® - Official APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ